X/ Galmudug Cali Gacal Casir “QM xaq uma lahan inay dalbadaan liis ka saarista muwaadin ay doorteen Shacab”!! | kowtharmedia.com
Qarax caawa ka dhacay Muqdisho
Guddoomiye Jawaari oo ka hadlay wixii maanta ka dhacay Xarunta Golaha Shacabka
AMISOM oo la wareegtay Amniga xarunta Golaha Shacabka
Fanaannada Sahra Axmed Jaamac oo Geeriyootay
Warar ku saabsan xarunta Golaha Shacabka Somaliya
Jawaari Oo saxafada usheegay in Madaxweynaha ku amray in uu is casilo
Wararkii ugu dambeeyay waan waantii lagu xalinayay khilaafka Baarlamaanka
Shir looga hadlayo Kor u qaadida Kaabayaasha Dhaqaalaha dalka oo ka socda Garowe
Faahfaahin dagaal ka dhacay Gobolka Gedo
Home WARAR X/ Galmudug Cali Gacal Casir “QM xaq uma lahan inay dalbadaan liis ka saarista muwaadin ay doorteen Shacab”!!
X/ Galmudug Cali Gacal Casir “QM xaq uma lahan inay dalbadaan liis ka saarista muwaadin ay doorteen Shacab”!!
Oct 17, 2016WARAR
Guddoomiyaha Baarlamaanka Galmudug Cali Gacal Casir ayaa jawaab ka bixiyay warqad ka soo baxday Xafiiska Wakiilka Qaramada Midoobey u qaabilsan Soomaaliya oo ahaa in Liiska xubnaha Aqalka sare laga saaro Jen. Cabdi Qeybdiid oo maalin ka hor loo doortay Kursiga Aqalka sare.
Cali Gacal casir ayaa sheegay in Qaramada Midoobey aanay xaq u laheyn inay dalbadaan liis ka saarista muwaadin Soomaaliyeed ay doorteen shacabka.
“Anaga runtii wax naga quseeya ma jiraan arrintaas, qof muwaadin Soomaaliyeed ee ay doorteen Baarlamaanka, waliba cod badan helay in laga saaro inay dhahaan ma ahan, markii hore manala dhihin qof hebel halaga reebo, warqadaasna inaan meelaha ka maqalnay mooyee nalooma soo dirin”ayuu yiri Guddoomiye Cali Gacal Casir.
Waxaa uu ugu baaqay Qaramada Midoobey inay tixgeliyaan rabitaanka shacabka Galmudug oo ay iyagu doorteen cidii ay rabeen sida uu yiri.
Baarlamaanka Galmudug ayaa shalay dhameystiray xubnaha u matalaya Aqalka sare oo ka kooban 8 xubnood, iyadoo ay u muuqato inay iska dhega tireen warqadii ka soo baxday Xafiiska Wakiilka Qaramada Midoobey ee ku taariikheysneyd 14-kii bishan.
Xubnaha Qaramada Midoobey qeyla dhaanta ka keentay ayaa waxaa ka mid ahaa Jen. Cabdi Qeybdiid oo loo doortay Kursiga Aqalka sare iyo Musharaxiinta kale ee ay soo gudbiyeen Maamulada Puntland iyo Jubbaland oo kala ah Maxamed Siciid Xirsi Morgan iyo C/fataax Maxamed Cali oo ka tirsanaa Ururkii Xisbul Islaam.
Wakiilka Qaramada Midoobey u qaabilsan Soomaaliya Danjire Micheal Keating ayaa warqad uu u diray Maamulada Puntland, Galmudug, Jubbaland waxaa uu ugu baaqay inay ka saaraan liiska shaqsiyaad lagu eedeeyay inay ka mid ahaayeen Hogaamiye kooxeedyadii dalka, isla markaana dambiyo dagaal galeen sidaasna Lagu cunsuriyeeyo Iyaga.
War saxaafadeed ay si wadajir u soo saareen Qaramada Midoobay, Midowga Afrika, Midowga Yurub, IGAD, Italy, Sweden, The United Kingdom iyo Maraykanka ayaa lagu sheegay inay ka walaacsan yihiin qaar ka mid ah musharixiinta Aqalka Sare ee baarlamaanka oo taariikh ku leh dambiyo ee kuqasabanaayeen hore loo galay oo ay ka mid tahay dambiyo dagaal, iyo rabshado.
Post Views: 17,515
Previous Postwareysi xiiso leh: halyeey Galan oo Ka waramay Awooda Ciidankiisa, Xiisad kala dhaxaysa C.wali gaas, kana hadlay dagaalka magaalada Gaalkacyo!! Next PostWeerar lagu qaaday Markab dagaal oo laga leeyahay Qaarada Maraykanka!!
Dalka Indonesia waxaa kunool Soomaali badan oo dalkaasi u tagtay qaxootinimo iyo waxbarasho, waxaana Soomaalida qaar loo aqoonsaday in ay yihiin Qaxooti halka kuwa...
Zlatan oo kulankiisa koowaad labo gool dhaliyay
Dhalinyaro Soomaali ah oo loo xiray dil loo geystay Haweeney u dhalatay Canada
Kalluunka Suuqyada Muqdisho oo Hoos U Dhac Laga Dareemayo
Kenya oo shaacisay in Si KMG Ah Dhismaha Darbiga u Joojiyeen (AQriso)
Ra’iisul Wasaare Kheyre oo Kormeeray qaar ka mid ah degmooyinka Muqdisho